विशेष आलेख : विभेदको मुद्दा के जातविशेषको मात्रै हो ? - Tanahun Awaj
Home विचार/दृष्टिकोण	विशेष आलेख : विभेदको मुद्दा के जातविशेषको मात्रै हो ?
by damauli 30th May 2020 30th May 2020
30th May 2020 30th May 2020 92 views
आफ्नी प्रेमिका लिन जाजरकोटबाट रुकुम पुगेका नवराज विकसहित ५ जनाको हत्या भएको विषय अहिले चर्चामा छ । सडकदेखि सदनसम्म जोडतोडले उठेको यो विषय कता मोडिन्छ, यसै भन्न सकिन्न । घटनामा स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि जोडिएकाले पीडितले न्याय पाउछन् नै भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । घटनालाई फरक तरिकाले मोड्ने र प्रमाण संकलन गर्ने कार्य भैरहेको बुझिएको छ ।
अन्य कुरा जेसुकै भए पनि विश्वकर्माको छोरा मल्लकी छोरीलाई विहे गर्न गएपछि नै यो पाशविक घटना घटेको प्रस्ट छ । सुन्दै आङ सिरिङ्ग हुने अपराध गर्न रुकुम चौरजहारी गाउँका बासिन्दालाई केले उक्सायो होला ? मानाैँ नवराज विकको ठाउँमा नवराज ढकाल या यस्तै माथिल्लो जात/थरकाे युवक हुन्थ्यो भने घटना यति पाशविक हुँदैनथ्यो ।
लेखिका प्रतिमा कार्की समाजसेबी , कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ । यो लेख news24 बाट साभार गरिएको हो ।